एक एपिसोडको ११ करोड लिने सलमानको पहिलो पारिश्रमिक चाँही ७५ रुपैयाँ ? - Glamorous Icon
१४ आश्विन २०७४, शनिबार ०४:४२
Home›GIcon News›एक एपिसोडको ११ करोड लिने सलमानको पहिलो पारिश्रमिक चाँही ७५ रुपैयाँ ?
सलमान खानले ‘बिग बोस’ होस्ट गरे बापत प्रति एपिसोड कति पारिश्रमिक लिने गरेका छन् ? यसको जबाफ उनले दिएका छैनन् । यद्यपी बाहिरी चर्चा के छ भने, प्रति एपिसोड उनले ११ करोड रुपैयाँ भारु लिने गरेका छन् ।
सलमान आफैमा ब्रान्ड हुन् । उनी त्यसै बिक्छन्, उसै बिक्छन् । सलमानलाई जोडिने हरेक कुरा बिक्छ । तर, सुरुवाती समय त्यस्तो थिएन । भलै उनी आफ्नो जमानाका चर्चित स्क्रिप्ट राइटर सालिम खानका छोरा हुन् । बलिउडमा स्क्रिनप्ले राइटिङमा सालिम र जावेदको जोडी एकदमै जमेको थियो ।
फर्कौ, सलमान खानतर्फ नै । अहिले बलिउड धानेका तीन खानामा उनी एक हुन् । थुप्रै ब्लकबस्टर फिल्म दिएका सलमान सामाजिक सेवामार्फत पनि आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो बनाउँदैछन् । उनै सलमानले सुरुवाती दिनमा काम गरे बापत भारु ७५ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएका थिए ।
यो पारिश्रमिक ‘जस्ट फर फन’ मा ब्याकग्राउन्ड डान्सरको रुपमा पाएका थिए । त्यसपछि एक पेयको विज्ञापनमा काम गरे वापत ७ सय ५० रुपैयाँ पाएका थिए । लामो समयसम्म सलमानले भारु १५ सय पारिश्रमिकमा चित्त बुझाए ।
सलमानको पहिलो सफल फिल्म थियो, मैने प्यार किया । त्यसको सुरुमा उनले ३१ हजार रुपैयाँ भारु पारिश्रमिक पाएका थिए । पछि ७५ हजार रुपैयाँ थप गरियो । सलमानले यो कुरा बिग बोस सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए । त्यसबेला भारतिय टेलिभिजन कलर्स च्यानलका सिइओ राज नायकलाई सोधिएको थियो, ‘सलमानले एउटा एपिसोडको ११ करोड नै लिने गरेका छन् त ?’
जबाफमा उनले यति मात्र भने, ‘सलमान त्यती सस्तो छैनन् ।’